လေးစားဖွယ်ကောင်းသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့၏ပြProbleနာ - ကောင်းသောဒုက္ခပြသနာအတွက်အယူခံ (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ ၂၀၂၁) - ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကင်ပိန်း
မတ်လ 7, 2021 သဘော 1
ကူးစက်ရောဂါသည်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာမညီမျှမှုများနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောလူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးစနစ်များကိုအစွမ်းထက်သော (ယောက်ျား) များ၏မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလှသောချမ်းသာကြွယ်ဝမှုစုဆောင်းမှုကိုဖြည့်ဆည်းရန်တီထွင်ကြံဆမှုမရှိသောလူမှုရေး၊
ဤဆောင်းပါးသည်အာဖရိကအမျိုးသမီးရေးဝါဒီတစ် ဦး မှပူးတွဲရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုကိုရရှိရန်လိုအပ်သောထိရောက်သောနှင့်စနစ်တကျပြောင်းလဲမှုများကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်သည့်စွမ်းအားအဆောက်အအုံများကိုအမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုနှင့်ပူးပေါင်းရန်သတိပေးသည်။
အယ်ဒီတာများ၏နိဒါန်း - ပါဝါအားအမှန်တရားကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုကျင်းပခြင်း
ဤစာစီစာကုံးသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သောအကြောင်းအရာများအားပြန်လည်ဖော်ပြသည် Corona ဆက်သွယ်မှုစီးရီးကူးစက်ရောဂါကြောင့်အားသစ်လောင်းပေးသောကျား၊ မရေးရာတရားမျှတမှုကိုခုခံနိုင်သည့်သိသာထင်ရှားသည့်အချက်များကိုပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမည်ခံခုခံမှုတစ်ခုချင်းစီသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖခင်အုပ်စိုးမှု၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သောစွမ်းအင်မညီမျှမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ ကျား၊ မ၊ လူမျိုးရေးနှင့်စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းကိုစွဲစွဲမြဲမြဲတည်ရှိနေသောအဆောက်အအုံများကိုဖွင့်ပြသည့်အချက်များဖြစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရှင်များသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပါဝါအမိန့်၏အခြေခံတရားမမျှတမှုကိုပြသသည့်မညီမျှမှုတစ်ခုစီအားရောင်ပြန်ဟပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ဤအဆောက်အအုံများကိုထွန်းလင်းပေးနိုင်သည်။ အာဖရိကအမျိုးသမီးများ၏ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းမှုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု (အခြားဒေသများရှိအမျိုးသမီးများအကြား) ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ ဤစုံစမ်းမှုသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများတည်ဆောက်သူများကွန်ယက် (GNWP) မှ၎င်းတို့၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွင်မျှဝေခဲ့သောအမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများ၏ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို အခြေခံ၍ ရနိုင်သည်။ # 10DaysofFeministGiving။ GNWP's တွင်ပါ ၀ င်သောကြွယ်ဝသောအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ မေးမြန်းခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည် COVID-19 နှင့်အမျိုးသမီးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအချက်အလက်များ။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်အမေရိကန်လူမည်းအမျိုးသမီးများ၏ထိရောက်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမူဝါဒသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
တစ်လျှောက်လုံးအခြေခံမေးခွန်းများမှာ လူ့တန်းတူညီမျှမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုရရှိရန်မည်သည့်အဆောက်အအုံများကိုပြောင်းလဲရမည်နည်း။ လက်ရှိအဆိုပြုထားသောအခြားရွေးချယ်စရာများမှာအဘယ်နည်း။ အခြားမည်သည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအပြောင်းအလဲများကိုမျှော်မှန်းနိုင်မည်နည်း။ လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တန်းတူညီမျှမှုလှုပ်ရှားမှုများသည်ကြီးမားသောနိုင်ငံသားများအားပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ချက်ကိုပညာပေးရန်နှင့်ဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုပေးသနည်း။ စစ်မှန်။ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောလူ့တန်းတူညီမျှမှုကိုရရှိရန်ထိရောက်သောရေတိုလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရေရှည်မဟာဗျူဟာများကအဘယ်နည်း။
လေးစားဖွယ်ကောင်းသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့၏ပြProbleနာ - ကောင်းမွန်သောပြanနာအတွက်အယူခံဝင်ခြင်း
Mwanahamisi Singano နှင့် Ben Phillips တို့က
(ပြန်လည်တင်ပို့သည် - Inter စာနယ်ဇင်းဝန်ဆောင်မှု။ မတ်လ 3, 2021)
နိုင်ရိုဘီ / ရမ်၊ ၂၀၂၁ မတ် ၃ ရက် (အိုင်ပီအက်စ်) - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့၏ထိရောက်မှုအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်မှာ၎င်းသည်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြtroubleနာများစွာကြုံတွေ့ရမည့်နေ့ဖြစ်ရန်အချိန်တန်ပြီ။
ဂုဏ်ပြုသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှမှတ်ချက်ပေးသည့်အစဉ်အလာအရရိုးရာအစဉ်အလာအရဖြစ်လာသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အမျိုးသားများအားအုပ်စုတစ်ခုတည်းအနေဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (ပိုမို ၀ င်ငွေပိုမိုရရှိခြင်း၊ ပိုမို ၀ င်ငွေရရှိခြင်း) နှင့်အမျိုးသမီးများအားအုပ်စုတစ်ခုတည်း (ဝင်ငွေနည်း၊ တတိယအချက်မှာအာဏာရှိသူများကိုမှန်ကန်စွာတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။
ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာကြီးသည်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ COVID-19 အကြပ်အတည်းသည်အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးများကိုနောက်ပြန်လှည့်သွားစေသည်။
အမျိုးသမီးများ၏အလုပ်အကိုင်သည်အမျိုးသားများထက်များစွာပိုမိုမြန်ဆန်သောနှုန်းဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းခံရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အခကြေးငွေမပေးသည့်စောင့်ရှောက်မှုခံနေရသော ၀ န်ထုပ် ၀ န်ပိုးများကိုများပြားစွာထမ်းဆောင်နေကြသည်။ ယောက်ျားလေးများထက်မိန်းကလေးငယ်များကိုကျောင်းမှနှင်ထုတ်ခြင်း၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုသည်မြင့်တက်လာခဲ့သည် အမျိုးသမီးများထွက်ပြေးရန်ခက်ခဲသည်.
ပြီးတော့အကျပ်အတည်းတွေဖြစ်လာတာနဲ့အမျှအမျိုးသမီးတွေကိုအဝေးကိုတွန်းပို့လိုက်တာဟာလုံခြုံစိတ်ချရမှုမရှိခြင်းနဲ့မရိုးသားမှုတို့က“ ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလ” တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသနေတယ်။ အကယ်၍ သင့်ကိုထီးကိုမိုးမရွာမှီတိုင်အောင်ဆက်ထိန်းထားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်၊ အဲဒီထီး။
အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများပါ ၀ င်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နောက်ကွယ်မှအမျိုးသမီးများ၏အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသောလူမျိုး၊ နိုင်ငံသားနှင့်လူတန်းစားတို့၏မတူညီသောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုရမည်။
ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလကအမေရိကန်၏ကိန်းဂဏန်းများအရအလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှု ၁၄၀,၀၀၀ ရှိသည်။ ထို့နောက်ဤအလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုအားလုံးသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် (ယောက်ျားများသည်အမှန်တကယ်တွင်အသားတင်အလုပ်အကိုင် ၁၆၀၀၀ ရရှိပြီးအမျိုးသမီးပိုက်ကွန်မှာ ၁၅၆၀၀၀ ဆုံးရှုံးသည်)
ဒါကြောင့်ဒီအဖြစ်အပျက်ကအမျိုးသမီးတွေဟာအုပ်စုတစ်ခုအနေနဲ့အမျိုးသားတွေအတွက်အရှုံးပေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေကြားမှာဒီအလုပ်အကိုင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအားလုံးကိုအရောင်အသွေးစုံလင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် - အဖြူအမျိုးသမီးတွေအသားတင်အလုပ်အကိုင်များရရှိခဲ့သည်!
James Baldwin ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းရင်ဆိုင်ရသည့်အရာအားလုံးကိုမပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း၎င်းကိုမရင်ဆိုင်မချင်းအဘယ်အရာကိုမျှမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။
နောက်ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့်နှစ်စဉ်ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုင်ရာနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး - အမျိုးသမီးများအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာကော်မရှင်သည်နယူးယောက်မြို့၌ (၂၀၂၁ မတ်လ ၁၅ ရက်မှ ၂၆ ရက်) တွင်ကျင်းပလေ့ရှိပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြောက်မှအမျိုးသမီးများနှစ်စဉ်အချိုးအစားမညီမျှမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြောက် ဦး ဆောင်သောအဖွဲ့အစည်းများမှကိုယ်စားပြုသောအမျိုးသမီးများမှဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အစည်းအဝေးကိုနယူးယောက်မြို့၌ပြုလုပ်သောကြောင့်ကမ္ဘာတောင်ပိုင်းမှအမျိုးသမီးများအတွက်ခရီးသွားလာရေးကုန်ကျစရိတ်သည်များသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်မည်သူ ၀ င်လာနိုင်သည်ကိုအတည်ပြုရန်လိုသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတောင်ပိုင်းမှအမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရေအတွက် Global North မှအမျိုးသမီးများထက်.
အမေရိကန်အစိုးရသည် CSW နှင့်အခြားနယူးယောက်အစည်းအဝေးများအတွက်မကြာခဏခွင့်ပြုသည့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှအမျိုးသမီးများအတွက်ဗီဇာ? ဆင်းရဲသောအမျိုးသမီးများ၊ ကျေးလက်နေအမျိုးသမီးများ၊ ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်များ၌နေထိုင်သောအမျိုးသမီးများ၊ ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးသမီးများ၊ နာတာရှည်ရောဂါများရှိသည့်အမျိုးသမီးများ၊ ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်သောအမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသမီးများလိင်လုပ်သားများ - လူမှုရေးအရဖယ်ကျဉ်ထားခြင်းခံရခြင်း၊
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် CSW တွင် Covid အကျပ်အတည်းသည်နယူးယောက်အခြေစိုက်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သာအမြင့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့သည် ပါ ၀ င်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ယခုနှစ် CSW တွင်သီအိုရီအရကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်နယူးယောက်ရှိအချိန်ဇယားအတိုင်းသာတည်ရှိသည်။ အာရှရှိသင်တန်းသားများကိုသူတို့၏ညဥ့်သို့မဟုတ်ထွက်ခွာခြင်းမှပါဝင်ရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်သည်။
လာမည့်နှစ်တွင်ပြန်လည်ရှင်သန်ဖွယ်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ကာကွယ်ဆေးပတ်စ်ပို့လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုပမာဏသည်ကမ္ဘာ့တောင်ပိုင်းရှိလူ ၁၀ ဦး တွင် ၉ ဦး သည်အမေရိကန်နှင့်အခြား Global North နိုင်ငံများမှတောင်ပိုင်းကုမ္ပဏီများကိုယေဘုယျဗားရှင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတားဆီးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ကာကွယ်ဆေး၏။
အမျိုးသမီးများအားတန်းတူညီမျှမှုအားဖယ်ထုတ်ခြင်းပုံစံအားလုံးကိုစိန်ခေါ်သောအခါမှသာအမျိုးသမီးများအတွက်တန်းတူညီမျှမှုကိုသဘောပေါက်လာလိမ့်မည်။ COVID-19 တွင်အာဖရိကနိုင်ငံများကညအချိန်တွင်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ချိန်တွင်သူတို့သည်ပုဂ္ဂလိကလူနာတင်ယာဉ်များမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်းအလွတ်သဘောပုဂ္ဂလိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆေးရုံကိုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်သူများအတွက်ခွင့်ပြုချက်မပေးခဲ့ပါ။ အဲဒီကိုသွား
ထိုနည်းတူစွာ၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုကိုကြုံတွေ့နေရသောအမျိုးသမီးများသည်ရဲများနှင့်အတူသွားပါကညအချိန်တွင်သူတို့၏အိမ်များကိုစွန့်ခွာသွားနိုင်သော်လည်းရဲတပ်ဖွဲ့တွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များပါ ၀ င်ရန်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါက (တစ်နည်းပြောရလျှင်၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝသူမည်သူမဆို)၊ သူတို့ဟာအမိုးအကာတစ်ခုဆီသို့လမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတရားမ ၀ င်ထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်တရားဥပဒေအရတားဆီးထားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အမှန်မှာ၊ များစွာသောမိန်းမတွေဟာ Femnet ကိုသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းရိုက်နှက်မှုမှထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခြင်းအားရဲများကရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပြောကြားခဲ့သည်
မတူကွဲပြားမှုရှိအမျိုးသမီးများအားလုံးသည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်များ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးများနှင့်တူညီသောအာဏာများကိုရရှိနိုင်စေရန်အတွက်နံရံများကိုဖြိုဖျက်ရမည်။ ဒီအရာအားလုံးကိုပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသာအနိုင်ရလိမ့်မည်။
Audre Lorde ဖော်ပြသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်သည်“ ငါတို့ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည့်ကမ္ဘာကြီးကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ရှာဖွေရန်အတွက်အဆောက်အ ဦး ပြင်ပတွင်သတ်မှတ်ခံရသူများနှင့်အတူတကွဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သခင်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်သခင်၏အိမ်ကိုဘယ်တော့မှဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ” လေးစားမှုအလုပ်မလုပ်ပါ တန်းတူရေးကောင်းသောဒုက္ခလိုအပ်သည်။
Mwanahamisi Singano သည်အာဖရိကအမျိုးသမီးရေးရာကွန်ယက် FEMNET ၏အကြီးအကဲဖြစ်သည်။ ဘင်ဖိလစ် * သည် How to ကိုရေးသားသူဖြစ်သည် မညီမျှမှုကိုတိုက်ထုတ်။
ယီမင် - ကိုးနှစ်အရွယ်စစ်ဇုန်ကျောင်းဆရာ
ဇြန္လ 29, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ဧပြီလ 20, 2020 သတင်းနှင့်အထူးများ 0
ပြcrisisနာကဆရာမဟုတ်ဘူး။ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတုပ်ကွေးရောဂါကတွန်းအားပေးသည့်ယန္တရားမရှိပါ။ သို့သျောလညျး, ငါတို့ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုအားဖြင့်, အကျပ်အတည်းကနေသင်ခန်းစာတွေသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ အကျပ်အတည်းသည်“ အလှည့်အပြောင်း” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်။ COVID-19 သည်မှားယွင်းသောအမှန်တရားအချို့ကိုလှုပ်ပစ်လိုက်ပြီးအနည်းဆုံးခဏမျှအခြေခံကျသောထင်ဟပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ဒီအခွင့်အလမ်းကိုသိမ်းယူရမည်ဖြစ်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
လျှောက်လွှာများ - အမျိုးသမီးများငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအတွက် Cora Weiss အဖွဲ့ ၀ င်
မေလ 22, 2019 ဂျော့ဘ် 0
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများကွန်ယက် (GNWP) သည်ငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီးများငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအတွက်နှစ်စဉ်လေးကြိမ်မြောက် Cora Weiss အဖွဲ့ ၀ င်ကိုကြေငြာရန်အားရဝမ်းမြောက်သည်။ [ဆက်ဖတ်ရန် ... ]
စစ်ပွဲ- HerStory - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့အတွက် ရောင်ပြန်ဟပ်မှုများ - ငြိမ်းချမ်းရေး ပညာရေးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု